गण्डकी प्रदेशले बजेटमा ल्यायो २ अर्ब ९१ करोडको कोभिड कोष
असार १, कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) को नियन्त्रण तथा उपचारका लागि रू.२ अर्ब ९१ करोड ७६ लाखको कोष बनाउने घोषणा गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले प्रदेश सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७ / ०७८ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै सो कुर...
गण्डकी प्रदेशमा थप ६ जनामा संक्रमण, संक्रमितको संख्या २०५ पुग्यो
असार १, कास्की । गण्डकी प्रदेशको तनहुँ र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पुर्व) जिल्लामा गरी थप ६ जनामा कोभिड–१९ संक्रमण पुष्टि भएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराले सोमवार जारी विज्ञप्तीमा तनहुँमा पाँच र नवलपरासीमा एक जना नयाँ संक्रमित थपिएको जानकारी दिएको छ । हालसम्म गण्डकी प्रद...
बेनीका किसानलाई ४० हजार माछाका भुरा वितरण
असार १, म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले नगरपालिका क्षेत्रका २७ किसानलाई माछाका भुरा वितरण गरेको छ । मत्स्य अनुसन्धान केन्द्र बेगनासताल पोखराबाट ग्रास र कमन कार्प जातको माछाका भुरा ल्याएर किसानलाई वितरण गरिएको नगरपालिकाको पशु शाखाले जानकारी दिएको छ । प्रतिभुरालाई ५० पैसाका दरले खरी...
कोल्डस्टोर निर्माणका लागि आएको रू. १ करोड फ्रीज
म्याग्दी । चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि संघीय सरकारबाट कोल्डस्टोर निर्माणका लागि बेनी नगरपालिकालाई प्राप्त भएको बजेट फ्रीज भएको छ । नगर क्षेत्रको किसानका समस्या र आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै नगरपालिकाकै मागबमोजिम कोल्डस्टोर निर्माणका लागि संघीय सरकारले रू. १ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । बजे...
लक्ष्मी ग्रुपद्वारा प्रदेश सरकारलाई रू. ५० लाखको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण
कास्की (अस) । व्यावसायिक घराना लक्ष्मी ग्रुपले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई रू. ५० लाख बराबरको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ । ग्रुपले प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको ‘कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोष’लाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको बताएको छ । लक्ष्मी ग्रुपका कार्य...
सिस्नेरीवासी दुई महीनादेखि अन्धकारमा
म्याग्दी (अस) । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–४ सिस्नेरीस्थित लघु जलविद्युत् परियोजना बन्द हुँदा यहाँका उपभोक्ता दुई महीना भन्दा बढी समयदेखि अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन् । चैत २२ गतेदेखि विद्युत् गृहको जेनेरेटरमा समस्या आएपछि विद्युत् उत्पादन बन्द भएको स्थानीय नन्दराज बुढाथोकीले बताए । उनका...
पर्वतमा पहिरोमा पुरिएका ८ को शव फेला
जेठ ३२, पर्वत ।पर्वतको कुश्मा नगरपालिका तीन दुर्लुङमा पहिरोमा पुरिएका आठ जनाको शव फेला परेको छ । दिनभरि खोज्दा पनि एक जनाको अवस्था पत्ता लागेन । शनिवार राति आठ बजे भीषण वर्षासँगै आएको पहिरोमा पुरिएको दुई घरका ९ जना मध्ये ५८ वर्षका तुलबहादुर थापा, ५७ वर्षकी मीनाकुमारी थापा, ३४ वर्षकी दिर्पा थापा, १४...
मुस्ताङ र डोल्पा सडक सञ्जालमा जोडिदै
जेठ ३२, ठिनी । गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङ र कर्णाली प्रदेशको डोल्पा जिल्ला सडक सञ्जालमा जोडिने भएको छ । संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मुस्ताङको साङ्ता हुँदै उपल्लो डोल्पाको छार्कालाई जोड्न सडकको काम सुरूआत गरेको हो । सो सडक निर्माणका लागि बागलुङस्थित सडक डिभिजन कार्यालयमार्फत...
सरकारविरुद्ध बेनीमा भद्र प्रदर्शन
जेठ ३२, म्याग्दी । कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले लिएको नीति सुधार गर्न माग गर्दै बेनीका युवाले आइतवार एक घण्टासम्म सरकारविरुद्ध भद्र प्रदर्शन गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडी जम्मा भएका युवाहरुले प्ले कार्डसहित भौतिक दुरी कायम गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । बिहान १० देखि...
लक्ष्मी ग्रूपद्वारा प्रदेश सरकारलाई ५० लाखको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण
जेठ ३२, कास्की । व्यावसायिक घराना लक्ष्मी ग्रूपले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई रू.५० लाख बराबरको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त कम्पनीले सरकारबाट स्थापना गरेको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको हो । लक्ष्मी ग्रूपका कार्यकारी निर्द...